ဖုန်းနောက်ပြောင်မှုများ- လက်လွတ်မခံသင့်သော အကြံဥာဏ်များ | Androidsis
ဖုန်းနောက်ပြောင်မှုများ- WhatsApp အတွက် ရယ်စရာကောင်းသော အတွေးအခေါ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုအတုများ...
ပြောင်ပြောင်လှောင်ပြောင်ခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ရန် မူလအစရှိရန်မှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုခက်ခဲလာပြီး ဤအကြောင်းကြောင့် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကြံဥာဏ်အချို့ကို ယူဆောင်လာပါသည် WhatsApp မှတဆင့် သင်၏အဆက်အသွယ်များပေါ်တွင် နောက်ပြောင်မှုများကစားရန် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။
လက်ရှိတွင်၊ WhatsApp သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသုံးအများဆုံး စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများကြားတွင်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ... ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် memes၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ပင် ပေးပို့နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ April Fools' Day သို့မဟုတ် အခြားအချိန်အခါများတွင် နောက်ပြောင်မှုများ။ ထို့နောက် သင် WhatsApp နှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ပေးပို့နိုင်သည့် အကောင်းဆုံး နောက်ပြောင်သော ခေါ်ဆိုမှုများစာရင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သွားပါမည်။
1 WhatsApp တွင် ဟာသလုပ်ခြင်းအတွက် တရားဝင်ပြဿနာများရှိနိုင်ပါသလား။
2 ဗလာစာတိုနှင့် ဂန္ထဝင်စာတစ်စောင် ပို့ပါ။
3 မက်ဆေ့ခ်ျအတုများ ပေးပို့ပါ သို့မဟုတ် ခေါ်ဆိုမှုအတု ပြုလုပ်ပါ။
4 Broken မျက်နှာပြင်
5 သင့်အသံနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဝှက်ထားပါ သို့မဟုတ် ဤနောက်ပြောင်သောအက်ပ်များကို စမ်းကြည့်ပါ။
WhatsApp တွင် ဟာသလုပ်ခြင်းအတွက် တရားဝင်ပြဿနာများရှိနိုင်ပါသလား။
အမှန် ဟာသရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ဝဘ်စာမျက်နှာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုအဖြစ် မယူဆနိုင်ပါ။သုံးစွဲသူသည် ပိုမိုပြင်းထန်နိုင်သည့် အခြေအနေတစ်ခုကို သတင်းပို့ရန် ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်မှန်သော်လည်း၊ တိုင်တန်းချက်နှစ်ခုကြောင့် Juasapp ကုမ္ပဏီမှ Miraclia ကို 2018 ခုနှစ်တွင် စပိန် ဒေတာကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီမှ စီရင်ချက်ချရာတွင် တရားရုံးနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်တရားရုံးစီရင်ချက်ကိုမျှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသေးပေ။ Miraclia သည် သေဆုံးသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏သဘောဆန္ဒမပါဘဲ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သဖြင့် Miraclia သည် စပိန်ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေအား ပြင်းထန်သောပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ပေါင်းလိုက်လျှင် ပြသနာများရှိလာမည်မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မတူညီတဲ့ နောက်ပြောင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဗလာစာတိုနှင့် ဂန္ထဝင်စာတစ်စောင် ပို့ပါ။
una မူရင်းနှင့် ရယ်စရာ ဟာသ သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ Black Message ( WhatsApp ) အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ အလွတ်စာတိုများ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကြောင့် သင်သည် ကော်လံ 1 နှင့် 10.000 အကြား ဗလာစာတိုများကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် ဖိုင်အလွတ်စာတိုများ ပေးပို့လိမ့်မည်။ဖြစ်ချင်တော့၊ တစ်ဖက်လူက မက်ဆေ့ချ်တွေကို မှန်ကန်စွာ လက်ခံမရလို့ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုလုံးကို မှန်ကန်စွာ မဖတ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်လိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ "ဟေး၊ ငါမင်းကိုပြောဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်" လို့ပြောဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာ တစ်ခုခုအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါနဲ့ ချိတ်ဆက်မှုမကောင်းတာကြောင့် ဖြတ်သွားတယ်လို့ ဟန်ဆောင်ထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကော်လံ 1.000 သို့မဟုတ် 10.000 အထိ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။. ဤနည်းအားဖြင့်၊ ထိုအတန်းအားလုံးကို လက်ခံရရှိသူသည် သင်အရင်ပြောခဲ့သည့်အရာကို မြင်နိုင်စေရန် အချိန်အတော်ကြာအောင် မျက်နှာပြင်ကို လျှောချရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့တွင် အရေးကြီးသော မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုရှိကြောင်း ၎င်းတို့အား အထက်တွင်ဖတ်ရန် ၎င်းတို့အား ပြောပြရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဤနည်းဖြင့်၊ တူညီသောအပလီကေးရှင်းအတွင်းတွင် သင်သည် စာသားကို ကလစ်ဘုတ်သို့ကူးယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင် WhatsApp အတွင်းရှိမည်သူမဆိုထံသို့လည်း တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်သည်။
လူတိုင်းကြိုက်တတ်တဲ့ ဂန္တဝင်ဟာသတစ်ခုပါ။ ယနေ့အချိန်အထိ WhatsApp black သည် အသုံးအများဆုံးဟာသများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဤ meme မှပုံများကိုဖန်တီးရန်မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနေပါသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုရန်သာလိုအပ်ပြီး ၎င်းကိုဖြတ်တောက်ကာ ချတ်တွင်မြင်ရမည့်ပုံသေးတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ မမြင်ရစေရန် အနက်ရောင်၏ထိပ်နှင့်အောက်ခြေတွင် အလိုအလျောက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
မက်ဆေ့ခ်ျအတုများ ပေးပို့ပါ သို့မဟုတ် ခေါ်ဆိုမှုအတု ပြုလုပ်ပါ။
နောက်ထပ် ရယ်စရာ နောက်ပြောင်မှုတစ်ခု ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်သူ့ကိုလှည့်ဖြားလိုသောအဆက်အသွယ်ဆီသို့ WhatsApp မှမဟုတ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကို။ Wassame ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေတစ်ဆင့် သင်လိုချင်တဲ့ နံပါတ်ကို သင်လိုချင်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ပေးပို့နိုင်တာကြောင့် ဒီဟာသကို အခြားလူတစ်ဦးအဖြစ် ဟန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ခေါ်ဆိုမှုအတုများသည် ဂန္တဝင်ဖြစ်သည်။ The Day of the Innocents မှာ ဘယ်တော့မှ မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦးထံသို့ ဤဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပုံစံသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကုမ္ပဏီတွင် ရယ်မောစေနိုင်ပြီး စကားဝိုင်းတစ်ခုလုံးကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်လျှင် ပို၍ပင်ကောင်းမွန်ပါသည်။
ခေါ်ဆိုမှုကို သင့် switchboard မှ တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် သင့်အား ယူရိုငွေ ကုန်ကျမည်မဟုတ်သောကြောင့် ၎င်းအတွက် သင့်တွင်ရှိသော အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်း Juasapp သည် Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအတွက်ကောင်းသည်မှာ သင်အလိုရှိသောနေ့နှင့် သင်အလိုရှိသောအချိန်တွင် ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန် အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် ဒဏ်ငွေကဲ့သို့သော လှည့်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုများကြားတွင်လည်း သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
JuasApp - ဖုန်းပြက်လုံးများ
ရေးသားသူ: FunnyApps LLC မှ
Fake Chat Conversations သည် အတုအယောင်ပရိုဖိုင်များဖန်တီးခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် မှားယွင်းသောအသံမက်ဆေ့ချ်များ၊ မှားယွင်းသောခေါ်ဆိုမှုများနှင့် အမှန်တကယ်မဟုတ်သော စကားဝိုင်းတစ်ခုကို အစစ်အမှန်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြားအရာများဖြင့် စကားဝိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်စေမည့် စံပြဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှိသည် ကျိုးနေသောမိုဘိုင်းမျက်နှာပြင် ၎င်းသည် အမှန်တကယ် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပြီး မည်သူမျှ လိုချင်မည်မဟုတ်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး အခြားသူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သည့် မိုဘိုင်းစခရင်ကို ချိုးဖျက်သည့်အခါ ပိုဆိုးပါသည်။ သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးတွင် ဤနောက်ပြောင်မှုကို ကစားလိုပါက Incredible Broken Screen Joke အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သင်လုပ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ၎င်းကို သင့်မိုဘိုင်းတွင်ထည့်သွင်းပြီး ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် သင်သည် ပျက်စီးနေသောစခရင်မှ သင်လိုချင်သောပုံကို ရွေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ၎င်းကို မိုဘိုင်းလ်နောက်ခံပုံတွင် အသုံးချနိုင်ရန် ကျန်ကို သင် configure လုပ်ရန်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင့်သူငယ်ချင်းသည် ၎င်း၏ မိုဘိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင် ကျိုးသွားသည်ကို ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊
သင့်အသံနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဝှက်ထားပါ သို့မဟုတ် ဤနောက်ပြောင်သောအက်ပ်များကို စမ်းကြည့်ပါ။
Juasapp နှင့် အလွန်ဆင်တူပြီး နောက်ပြောင်ကစားရန် အကောင်းဆုံးအက်ပ်မှာ မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့် နောက်ပြောင်မှုများဖြစ်ကြောင်း JokesPhone ဟူသောအမည်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ဤအက်ပ်၏ကျေးဇူးကြောင့် သင်သည် အခြားသူတစ်ဦး၏အသံကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲ သင်အလိုရှိသော မည်သည့်အဆက်အသွယ်ကိုမဆို ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ကမောက်ကမဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို မသိနိုင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လြှောကျလှာ Empty Messages သည် သင့်အား WhatsApp တွင် ဗလာစာတိုများ ပေးပို့နိုင်စေပါသည်။ သင်သိမ်းဆည်းထားသော အဆက်အသွယ်များအားလုံးသို့ လက်ခံရရှိသူတွင် မက်ဆေ့ချ်ပူဖောင်းများ ပါရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း အတွင်းတွင် မည်သည့်မက်ဆေ့ချ်ကိုမျှ မတွေ့ရတော့ဘဲ ၎င်းသည် လက်ခံရရှိသူအတွက် အလွန်ရယ်စရာကောင်းသော်လည်း စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
လူသိအများဆုံး နောက်ပြောင်သည့်အက်ပ်သည် JuasApp ဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။. ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် လွယ်ကူပြီး အလိုလိုသိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဟာသသည် သင်အလိုရှိသောသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် အလိုအလျောက် Locution အသံနှင့် မည်သည့် Script အမျိုးအစားမှ မပါဝင်ပါ။ ခေါ်ဆိုမှု ပြီးဆုံးသောအခါ၊ စကားဝိုင်းတစ်ခုလုံးကို နားထောင်ရန် အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲသူထံ အသံသွင်းခြင်းကို ပေးပို့ပါသည်။ ၎င်းသည် လောလောဆယ်တွင် ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာအချို့ရှိနေကြောင်း မှန်ကန်သော်လည်း ၎င်းသည် လက်ရှိလက်တွေ့တွင် အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည် သင့်အား စကားဝိုင်းကို အမှန်တကယ် ဦးဆောင်နေသည့်အခါတွင် သင်သည် သီးခြားလူတစ်ဦးနှင့် စကားပြောနေပုံပေါ်စေရန် WhatsApp အတွင်းရှိ မည်သည့်စကားဝိုင်းအမျိုးအစားကိုမဆို ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ သင့်သူငယ်ချင်းများကို ရူးသွပ်သော သို့မဟုတ် မမျှော်လင့်ထားသော စကားဝိုင်းကို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ပြလိုသောအခါတွင် ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးနောက်ပြောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အဲဒါပါပဲ။ လက်ထဲတွင် စကားပြောဆိုမှုနှင့်အတူ မင်းမှာ အထောက်အထားတွေ အပြည့်ရှိလို့ သေချာပေါက် ရိုက်ချက်တစ်ခုပါပဲ။
WhatsFake - စကားပြောအတု
ရေးသားသူ: WhatsFake - FakeChat
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ဖုန်းနောက်ပြောင်မှုများ- WhatsApp အတွက် ရယ်စရာကောင်းသော အတွေးအခေါ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုအတုများ...
Android ပေါ်မှာ screen ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ
Android အတွက် အကောင်းဆုံး အကြီးစား ဘောလုံးဂိမ်း3ခု